शाहकाे प्रश्न- बालुवाटार जग्गा अनुसन्धान गरिरहेका डिएसपीलाई किन सरुवा गरियो ? « News24 : Premium News Channel
शाहकाे प्रश्न- बालुवाटार जग्गा अनुसन्धान गरिरहेका डिएसपीलाई किन सरुवा गरियो ?
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व उपाध्यक्ष ऋषिकेश जङ्ग शाहले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका डिएसपीलाई सरुवा किन गरेको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनले यो सरुवा प्रकरणले सरकारको नियत कति खराब छ भनेर प्रस्ट पारेको पनि उनले जिकिर गरे। सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएर युद्ध निम्त्याउन खोजेको भन्दै तत्काल विप्लवसँग वार्ता गर्न शाहले सरकारलाई आग्रह गरे।
बुधवार ११ विद्यार्थी संगठनले राजधानीमा आयोजना गरेको विद्यार्थी एकता दिवस तथा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व उपाध्यक्ष शाहले युद्ध नेपाली समाजले नचाहेको बताउँदै सरकारलाई विप्लवसँग वार्ताको वातावरण बनाउन र विप्लवका विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाललाई लाई तत्काल रिहाइ गर्न पनि माग गरे।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कब्जाबारे छानबिनमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी कविद कटुवाललाई रौतहटको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर पठाइएकाे थियाे । त्यहाँ कार्यरत डीएसपी कुमुद ढुंगाना छानबिनका लागि काठमाडौं तानिएपछि खाली रहेको स्थानमा उनलाई पठाइएको हो ।
सरकारले अध्यक्ष ढकाललाई तत्काल रिहाइ नगरे देशभर शैक्षिक हडताल गर्ने पनि चेतावनी दिए। कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष महासचिव प्रकाश राई, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरि कृष्ण गजुरेल, अखिल पाचौंका अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, नयाँ विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, राजपा विद्यार्थीका सङ्गठनका महासचिव रञ्जित निष्पक्ष, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रवीण मिश्र, अखिल क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य मिलन राईको उपस्थिति रहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता अनुराग शाहले जानकारी दिए।